တရုတ် 40ft မိုဘိုင်းကွန်တိန်နာငါးအသားဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ရေခဲမုန့်ဆိုင်အအေးခန်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ကျုပ်
စီးပွားဖြစ် Cube ရေခဲစက်
စက်မှု cube ရေခဲစက်
Cummins အဏ္ဏဝါ genset
Yuchai အဏ္ဏဝါ genset
Cummins အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
Perkins အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
Weifang အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
Yangdong အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
Shangchai အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
Weichai အင်ဂျင်နှင့်အတူ Generator ကို
စနစ်နှင့် ATS စင်ပြိုင်
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး 5hp 4DES-5 Co. , ...
4CES-6 သည် bitzer co အအေးခံ ...
ဂျာမနီ Bitzer တွန်း4...
compressor ငွေ့ရည်ဖွဲ့ယူနစ် ...
40ft မိုဘိုင်းကွန်တိန်နာငါးအသားဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ရေခဲပြင်စတိုးဆိုင်အအေးခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း
လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပူချိန်: -35 ℃ပါဝါ (W): 25kw Dimension (L * W * H): ဝယ်သူလိုအပ်ချက်အရအာမခံချက် - ၁ နှစ်သက်ဆိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ - ဟိုတယ်များ၊ အဝတ်အထည်ဆိုင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ စက်ပြင်စက်ရုံများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၊ အစားအစာ လက်လီအရောင်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ပုံနှိပ်အရောင်းဆိုင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာစျေးဆိုင်များ, အာမခံကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပြီးနောက်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ အပိုပစ္စည်းများ, Fi .. ။
အပူချိန် -35 ℃ ပါဝါ (W): ၂၅kw
အရွယ်အစား (L * W * H): ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအရသိရသည် အာမခံချက် - 1 နှစ်
သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ တည်းခိုခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်နှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာအရောင်းဆိုင်များ, ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ အာမခံဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်: ဗွီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ ကွင်းဆင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
ဒေသခံဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ: ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မက္ကဆီကို၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ ကင်ညာ၊ အာဂျင်တီးနား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ချီလီ၊ ယူအေအီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ တောင်အာဖရိက၊ ကာဇက်စတန်၊ ယူကရိန်း၊ ကာဂျစ္စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ အရောင်းပြခန်းတည်နေရာ: ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မက္ကဆီကို၊ ရုရှား၊ ထိုင်း၊ မော်ရိုကို၊ ကင်ညာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တောင်အာဖရိက၊ ကာဇက်စတန်၊ ယူကရိန်း၊ ကာဂျစ္စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊
အခြေအနေ: အသစ် မူလနေရာ Fujian, တရုတ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: ကျုပ် ဗို့အား: 380V / 50HZ / 3P
အလေးချိန် ၁၈၀၀ ကီလိုဂရမ် လက်မှတ်: CE ISO
ရောင်းချပြီးနောက် - အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ, ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း, ကော်မရှင်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး, လယ်ပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှု, ဗွီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, အွန်လိုင်းထောက်ခံမှု အဓိကရောင်းဝယ်ရေးအချက်များ - ယှဉ်ပြိုင်စျေး
အဟောင်းသို့မဟုတ်အသစ်: အသစ် ပစ္စည်း သံမဏိ, သံမဏိ
Compressor အမှတ်တံဆိပ်: Bizter / Tecumseh / Copeland အမျိုးအစား: ရေခဲသေတ္တာ Compressor ယူနစ်
အသုံးပြုမှု - နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်အမည်: Cold Storage PU-panel
လုပ်ဆောင်ချက်များ - တွေ့ဆုံ၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစသဖြင့် သော့ချက်စာလုံး အအေးခန်း
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: အအေးခန်းရေခဲသေတ္တာများကိုတည်ဆောက်ပါ အထူ၏အထူ: 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm
အရေအတွက် (သတ်မှတ်ချက်များ) ၁ - ၅ > 5
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 25 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
CSCPOWER ၆ ကီလိုပါရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Burkina Faso တွင်အသုံးပြုသည်
8.Combiner box ကို
2.cold အခန်းအအေးသိုလှောင်မှုအောက်ပါ features တွေရှိပါတယ်
၁။ လှပသောအသွင်အပြင် - insulation panel နှင့် framework ကိုအမျိုးမျိုးသောအရောင်များဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အ ဦး ပုံစံများနှင့်အညီကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ကာကွယ်ခြင်း။ လျှပ်ကူးစွမ်းအားနိမ့်ခြင်းနှင့်အပူစီးကူးမှုနည်းခြင်းနှင့်စွမ်းအားမြင့်ခြင်းတို့ဖြင့် Polyurethane သို့မဟုတ် polystyrene ကိုအသုံးပြုသည်။
၂) အပူချိန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းအကွာအဝေး၊ အပူချိန်နိမ့်ကျသည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မပျက်စီးလွယ်သောနေရာများတွင်ပင်သေးငယ်သောကန်ထရိုက်ပစ္စည်းများ။
1. အသီးအနှံ၊ သစ်သီးသိုလှောင်စက် (0-5′C)
2. အရက်၊ ဘီယာလမ်းလျှောက်ခြင်း (2-8′C)
၃။ အသား၊ ငါးသိုလှောင်ရေခဲသေတ္တာ (-18′C)
4.Medicine Storage Cooler (2-8′C)
၅။ ဆေးသိုလှောင်ရေးရေခဲသေတ္တာ (-20′C)
၆။ အသား၊ ငါးပေါက်ရေခဲသေတ္တာ (-35′C)
ဖူဂျီရာစု SEA GROUP, LTD ။ (CSC GROUP) သည်ဖူဂျီပြည်နယ် FUZHOU မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းယွမ်သန်း ၈၀ ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
CSCPOWER ICE MACHINE CO ။ , LTD တွင်ရေခဲစက်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေခဲစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အလွှာရှိသောရေခဲစက်စီးရီးများ၊ ပြွန်ရေခဲပြင်စက်စီးရီးများ၊ Cube ရေခဲပြင်စီးရီးများ၊ ပိတ်ဆို့ထားသောရေခဲပြင်စက်စီးရီးများ၊ , system.etc အအေး, ကြိုတင်ရောင်းချမှုထောက်ခံမှု, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်ခြင်း, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် debugging ၏ပြီးပြည့်စုံအစုံ, ဖောက်သည်လေ့ကျင့်ရေး၏ပြီးပြည့်စုံသောအင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကိုအစုအဝေးမှဖွဲ့စည်းခဲ့ရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းကိရိယာများအပြည့်, ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလတ်ဆတ်သောစူပါမားကက်၊ ဆေးရုံ၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ကရစ်ရောစပ်ခြင်း၊ ရေနက်ပိုင်းငါးဖမ်းခြင်း၊
CSCPOWER သည်ငွေကြေးအကဲဖြတ်မှု (အကြွေးစစ်ဆေးမှုအပါအ ၀ င်) ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်၏အကြွေးမှတ်တမ်းများအပါအ ၀ င် ALIBABA ၏ဘဏ္byာရေး ဦး စီးဌာနမှကြီးမှူးကျင်းပခြင်း၊
စီးပွားရေးအချက်အလက်များ၊ Alibaba ကွန်ယက်၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
မင်းကို 100% ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတယ်။
ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်ကသင့်အား ၁၀၀% အကာအကွယ်ပေးသည်။
> 100% ငွေပေးချေမှုကာကွယ်မှု
> 100% ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကာကွယ်မှု
> 100% အချိန်မီတင်ပို့မှုကာကွယ်မှု
အဘယ်ကြောင့် CSCPOWER ကိုရွေးချယ်ပါ
CSCPOWER သည်ကုန်သွယ်မှုအာမခံပေးသူများ၏ပထမအုပ်စုဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်မှာဒေါ်လာ ၁၆၇၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
သဘောတူထားသည့်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များကိုမလိုက်နာသောအမိန့်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုအာမခံငွေ၏ ၁၀၀% ပြန်အမ်းငွေ။
မည်သည့်ကိုးကားမှုအတွက်မဆိုအောက်ပါမေးခွန်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ။
အစားအစာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ ရေခဲသို့မဟုတ်အခြားသူများအတွက်သင်၏အအေးခန်းသိုလှောင်ခန်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။
3. အအေးသိုလှောင်ခန်းရှုထောင့်, အရှည်, အကျယ်, အမြင့်ကဘာလဲ?
သင်မီးစက်လိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်လည်းမီးစက်အမျိုးမျိုးကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.cscpower.cn ကိုနှိပ်ပါ။
ရှေ့သို့ CSCPOWER နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက် 1000KG စီးပွားဖြစ်ဆိုလာစွမ်းအင်သုံးရေခဲပြင်ပိတ်ဆို့ခြင်းစက်များသည်ကျွန်းများအတွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်တန်ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: 20ft Mobile Container ငါးအသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုလာစွမ်းအင်အအေးခန်းသိုလှောင်ခန်း၊ ရေခဲစတိုးဆိုင်ဆိုလာအအေးခန်း
Tieling စက်မှုဇုန်၊ ကြံလမ်း၊ Minhou ပြည်နယ်၊ Fuzhou City, Fujian ပြည်နယ်